भूगर्भशास्त्रीको नजरमा भूकम्पको बारेमा जान्नैपर्ने रहस्यहरु — newsclubnepal.com
प्राडा विशालनाथ उप्रेती प्रकाशित : २०७५/५/१२ गते
नेपालमा गएको भुइचालोको मापन गरेका डेटा रिसर्चरहरुले प्रयोग गर्न पाएन भन्छन् नि !
खानी विभागको कुरा अर्कै हो । त्रिविविको कुरा अर्कै हो । ३६ वर्ष अगाडि खानी विभागमा फ्रेन्च सरकारको सहयोगमा त्यहाँका रिसर्च गर्ने संस्थाले सेस्मिक स्टेशनहरु ल्याएर राखेको हो । त्यसपछि अमेरिकाको ‘क्यालिफोर्निया इन्स्च्टियूट अफ टेक्नोलजी’का प्रोफेसरले केहि जिपिएस स्टेशनहरु ल्याएर राखेको थियो । विश्वविद्यालयसँग सेस्मिक स्टेशनहरु नै छैन । यसरी राखेका स्टेशनहरुबाट आएको डेटा खानी विभागमै आउने गर्दछ । करीव केहि मिनेट भित्रै भूकम्पीय ‘डेटा एनालिसिस’ गरेपछि, कहाँ, कति तल र कति म्यागिच्यूटको हो भनेर भन्न सकिन्छ । यसमा केहि समस्या देख्दिन तर ग्लोबल पोजिसन सिस्टम (जिपिएस)को डेटालाई एनालाइसिस गर्ने हामीकहाँ क्षमता नै छैन ।
त्यो क्षमता खानी विभागले किन विकास गरेन वा सरकारले किन वास्ता गरेन त्यो हामीले भन्ने होइन । खानी विभागसँग भएका त्यस्ता स्टेशनहरुमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापकहरुले अनुसन्धान गर्न नपाउने भएपछि कहिले देशमा क्षमता विकास गर्ने त ? हामीले नै तीस पैतीस वर्षदेखि नेपालमा ठूलै भूइचालो जान्छ भनिरहेका थियौं । अध्ययन गर्न प¥यो भनिरहेका थियौं । सरकारले खानी विभाग मै पनि अनुसन्धानको लागि न्यून रकम खर्च गर्दछ । सरकारले भूकम्पको अध्ययन÷अनुसन्धानको लागि एक पैसाको इकुपमेन्ट न किनेको छ न अनुसन्धानको लागि भनेर खर्च गरेको छ । अर्काले दिएको प्रविधि हेरचाह गर्ने शिवायः ।
खानी विभाग, फ्रेन्च सरकारको स्वामित्वमा त्यो डेटा हुन्छ । तर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले मागेको खण्डमा उपलव्ध भने हुदैन । अर्को जिपिएस प्रणाली जुन छ यसले जमिनको चलायमान मापन गर्दछ, ‘सेस्मो मिटर’ वा ‘सेस्मोग्राफ’ जसले भूकम्पको गहिराई र म्याग्निच्युट नाप्ने काम गर्छ । जिपिएसले मापण गरेको चलाएमानको ‘डेटा एनालिसिस’ गर्ने विषेशज्ञ खानी विभागसँग छैन । यो जसले राखेको उसले नै ‘एनालिसिस’ गर्ने गर्दछ । यस किसिमको समस्या देखिए पछि मैले अमेरिकाको वासिङ्गटन युनिभर्सिटीसँग भएको पुराना इकुपमेन्ट मागे । हाम्रा विद्यार्थीले पनि सिक्छन्, हामी पनि अनुसन्धान गर्छौं भनेर ६ वटा स्टेशनहरु राख्न सफल भएका छौं ।
उनीहरुले तीन वर्षसम्म फिल्डमा जाने आउने, मर्मत लगायत खर्च उपलव्ध गराए । त्यसपछि ‘युनेस्को’को ‘युनेप’ भन्ने संस्थासँग मिलेर अर्को ‘इकुपमेन्ट’ नास्टको कम्पाउण्ड भित्र राखेका छौं । हामीसँग पनि एनालिसिस् गर्ने क्षमता छैन । हामीले दश दिनको स्थानिय ट्रेनिङ्ग चलायौं पनि, तर दश दिनको सिकाइले त्यसले पूर्णता नपाउने रैछ । यस किसिमको नेपाली दक्षताको टक्कारो आवश्यकता महशुस गरेका छौं ।
त्यस्तो टेक्नोलजी भने हामीकहाँ छैन । त्यस किसिमको अनुसन्धान गर्न स्याटिलाइट चाहिन्छ, इकुपमेन्ट पनि छैन । नेपालको स्यटिलाइट नै छैन । यसका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्नेहुन्छ । वितेका चालिस वर्षको अन्तरालमा नेपालमा कति जना भूकम्पविद्हरु उत्पादन भए भनेर सरकारलाई सोध्ने हो भने यसको जवाफ सरकारसँग छैन । साच्चिकै भूकम्पको बारेमा सेस्मोमिटरले दिएको डेटालाई एनालिसिस गर्ने, टे«न्चिङ्ग (पुरानो भुइचालोको बारेमा जमिन खनेर अध्ययन) गर्ने कति जना विज्ञ छन् ! खाली कहाँ र कति रिक्टरको भुइचाले गयो भनेर पुग्दैन ।
पुरा हिमालयकै क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिमको अध्ययन गर्ने कति जना छौं । खानी विभागसँग डा. सोमनाथ सापकोटा र लोक विजय अधिकारी छन् । त्यस्तै त्रिविविकै उत्पादन जापानमा सेस्मोलजीमा पिएचडि गरेका सुवेश घिमिरे, दिपक चम्लागाई, बाँकी दुइतिन जना छन्—त्यो विदेशमा छन् । त्रिविविसँग आफ्नो सेस्मिक स्टेशन नेटवर्क छैन । अव त्रिविविका विज्ञहरुसँग डेटा छैन, अनुसन्धान गर्नलाई । दक्ष डाइभर छन्, दिमागि खिया लगाएर गाडिको प्रतिक्षामा बसेका । यस्तो अवस्था छ देशको । संसारमा नै विश्वविद्यालयले हो अनुसन्धान गनर्,े हाम्रो विश्वविद्यालय ताल नै लथालिङ्ग छ । कसरी हाम्रो विकास हुन्छ ?
खाली सरकारको गाली गरेर मात्र हुने केहि होइन, तरपनि सरकारले नै चासो देखाउनु पर्छ । अर्को खानी विभागले पनि कन्भिन्स गराउन नसकेकै हो । आज जुन भुइचालो मापन बताउने कम्प्यूटर राख्ने घर २५/३० वर्ष भइसक्दा समेत नबनाइएको अवस्था छ । भुइचालोको समयमा त्यो घर भत्केर महत्वपूर्ण इकुपमेन्ट ध्वस्थ हुन्छ भन्दा पनि सरकारले बनाइदिएको छैन । अनि सरकारलाई दोष नदिएर कसलाई दिने । त्यहाँ काम गर्नेहरु थरथर कामेर काम गर्दै भूइचालोको अपडेट गराइराखेका छन् । यस्तो अवस्था छ हाम्रो । सरकारले त्यहाँ भएका जनशक्तिलाई ट्रेनिङ्ग दिने, पिएचडि गराउने, एक से एक दक्ष जनशक्ति राख्नु पर्ने हो नि, खै त !
तर ल्याण्ड सिफ्ट भएर काठमाडौं दक्षिणतर्फ सरेको भनिन्छ ?
यति औं स्थान भन्नेर भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण कुरा होइन । हामीलाई भूकम्प जान्छ, यो तयारी अवस्थामा छ, कुन बेला जान्छ भन्न नसकेको मात्र हो । ठिक्क कहिले जान्छ भन्ने कुराको आंकलन साधारण रुपमा गर्न सकिन्न । कहिले कहिले भूकम्प गयो भन्ने समयको गणना गरेर भविष्यमा जाने भूकम्पको आंकलन गर्न सकिन्छ । यसको लागि अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हामी विदेशीको भरिया हुनु बाहेक हाम्रो सिप र दक्षतालाई खुम्च्याएर राखेको अवस्था छ । नेपालको साइन्टिस, प्रोफेसर भनेको सरकारका लागि तल्लो दर्जाको नागरिक हो । उनीहरुको व्यवहार हेर्दा यस्तै लाग्छ । कि त सरकारले जान्न पथ्र्यौ, कि त जानेका मानिसहरुले भनेको सुन्न पथ्र्यों, उनीहरुसँग सुन्ने सामथ्र्य पनि छैन । उनीहरुलाई अनुसन्धानको कुरा उठाउने वितिकै मुन्टो बर्टार्ने, रकम माग्न गएपनि दिने पनि होइन, खाली दुख दिने भन्दा अर्को काम सरकारी संयन्त्रको छैन । यत्रो भुइचालो गयो बाँकी सर्न पर्ने जमिन सरेन, किन सरेन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन । त्योभन्दा अर्को ठूलो भुइचालो झ्वाट्ट आउने हो कि त्यो पनि थाहा छैन । यस्तो विपतको बेला अहिले जिपिएस ल्याएर थप्नु परेको छ । महाभारत खण्डको यो हाम्रो भू–भागमा गएको भुइचालो काठमाडौं मुनि आएर अड्केको छ ।
जान पर्ने ठाउमा जान पाएन । त्यसमा काम गर्न इकुपमेन्ट चाहियो, विदेशी मित्रहरु त्रिविविसँग मिलेर अनुसन्धान गर्नकालागि इकुपमेन्टसहित नेपाल आउने भए । हामी आउँदै छौं, इकुपमेन्ट ल्याउने व्यवस्था मिलाइदेउ भन्दा हाम्रो सरकारी संयत्रका कारण इकुपमेन्ट ल्याउन पनि झन्झट भयो । यस्तो आपतकालको वेलामा खाली इकुपमेन्ट ल्याएर राखी अनुसन्धान गर्न पनि यत्रो झन्झट !
कुरा त्यसो होइन । हामीले ठूला भूकम्प गइसकेपछि त्यही स्थानमा केन्द्र भएर अर्को त्यतिकै ठूला भुइचालो जादैंन भनेका थियौं । साना साना पराकम्पन जान्छन् भनेकै हो । त्यसपछि भोलिपल्ट ६.८ म्याग्नीच्यूटको गयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लियौं । त्यसपछि ५ र ४ म्याग्निच्यूटको आउँदा समेत हामीले आम मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नु भनेको थियौं । तीन दिन त हामीले घर भित्र जानु हुदैन भनेका पनि थियौं ।
लगातार १७ दिनसम्म विश्वमा देखिएका ट्रेन्ड अनुुसार नै भूकम्पको पारकम्पन देखिएको थियो । हामीले ४÷५ म्याग्निच्यूटको आए पछि ५÷६ को आउँदैन भनेको पनि होइन । ठूलो भुइचालो आएको बेला छिटो छिटो मिनेटमा भुइचालो आएको थियो नि ! तर एक्कासी अर्को छेउमा केन्द्रविन्दुभएर ७.३ म्याग्निच्यूटको भूकम्प आयो । यो भनेको सयमा १ प्रतिशत अनौठो घट्ना हो । यो कसैले अगाडि नै भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यसले पहिला जुन स्थानसम्म भूभाग चरकेको थियो, त्यस स्थानबाट सरेको अवस्था हो । यसकारण शक्ति सन्चय भएर बसेको अझ पूर्वको भूभाग सार्ने काम यो भुइचालोले गर्यो । यसअर्थमा भूगर्वविद्हरुले भनेको अहिलेसम्मकै विकसित ट्रेन्ड हो, त्यसभन्दा बाहिर हामी गएर कुरा गरेका छैनौं ।
नेपालको गोरखादेखि भारतको देहरादुनसम्मको बीचमा सन् १५०५ मा एउटा ठूलो भुइचालो गएको थियो । त्यसपछि हालसम्म ठूलो भुइचालो गएको छैन । त्यतिेर करीव ८.६ म्याग्निच्यूटको भूकम्प गएको अनुमान गरिएको छ । त्यो भुइचालोले २० मिटर जमिन सारेको थियो । अहिले त जम्मा ३.६ मिटर सरेको अवस्था छ । सन् १५०५को भूकम्पले दिल्ली–आग्रादेखि केरुङ्ग–ल्हासासम्म असर गरेको थियो । पूर्वतिरको कुरा गर्नु पर्दा झापादेखि लिएर सिक्किम–भूटानसम्म झन्डै नौ सय वर्ष सम्म भुइचालो गएकै छैन । यसकारण त्याहाँ ठूलो शक्ति सन्चय भएर बसेको छ । यदि त्यहापनि भुइचालो गएमा ०९० सालको भन्दा ठूला भूकम्प जान सक्छ ।
भूइचालोपछिको पुननिमार्ण गर्न थप रिसर्च हुन जरुरी छ । काठमाडौंको हकमा चुस्त प्लानिङ्को जरुरी छ । भक्तेका र चर्क्रेका घर हेरर आगामि दिनमा कसरी मजवुद घर बनाउनेमा रिसर्च गर्नु पर्दछ । अर्को कुरा पहाडका परम्परागत टुङ्गा माटाका घरहरु भनेका धराप हो, त्यो त सकेण्डमा नै ढल्नसक्छ । मानिस बाहिर निस्कन नै भ्याउदैन । त्यसको लागि इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, जियोलोजिस्टलगायत राखेर पहाडी घरहरु कसरी निमार्ण गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । अव बनाउने घरमा परेर मान्छे नमरुन । काठमाडौंमा अग्ला घर बनाउन दिने कि नदिने, यदि दिएमा कस्ता किसिमलाई दिने कडा निति सरकारले ल्याउनु पर्दछ ।